Shiinaha WP-WDG Nidaamka – U Codso Warshadda Agrochemical Field iyo soosaarayaasha | Qiangdi
Marka hore, Qalabka ceeriin wuxuu ka quudiyaa quudiyaha - wareejinta maaddada illaa 3 m3fiicni for premixing, iyo ururiye boodh ururin doonaa boodhka inta lagu guda jiro geeddi-socodka quudinta, ka dibna wax isku qasan galaan QDF-600 jet dhagax shiiday, cabbirka walxaha wax soo saarka lagu hagaajin karaa iyadoo la hagaajinayo xawaaraha wareega kala duwan ee wheel classifier ah ,. Miliqista ka dib, maaddada ayaa loo wareejin doonaa duufaanka iyo boodhka aruuriyaha ee dusha sare ee 4m3 fiicni ku dhex marto awoodda bartamaha ee taageere qabyo ah, ka dibna u wareeji 4m labaad3 Mashiinka isku qaska kahor xirmada ama u wareejinta nidaamka WDG.
Nidaamka WP / WDG - Codso Qorshaha socodka Agrochemical
Nidaamka WP waa isku-dhafnaan kaamil ah tikniyoolajiyada diyaaradda jet, isku-dhafka tikniyoolajiyadda iyo tikniyoolajiyadda xakamaynta caqliga leh taas oo ah wax soo saar qancisa oo loogu talagalay sunta cayayaanka si ay isugu qasto iskuna celiso ， Dhanka kale, waxay la kulantay dalab deegaan oo ahaa in habaas uusan dhicin inta howsha socoto oo dhan.
WDG (granule kala firdhin kara biyo) sidoo kale loo yaqaan budada qoyan wakiilka hakin qalalan ama nooca hadhuudhka, alaabta ceyriinka ah ee budada qoyan (WP) ee lagu sameeyay granulation mar kaliya biyaha, si dhakhso leh ayey u kala firdhi kartaa oo u kala firdhi kartaa, isku diyaarinta granular ayaa ah mid nidaamsan oo kala firidhsan oo adag.
Granulation waa udub-dhexaadka geeddi-socodka oo dhan. Granulator waa furaha si loo hubiyo in sunta cayayaanka ee granulated iyo geedi socodka qalajinta la isla fahmi karo, taas oo ku saleysan sifooyinka sunta cayayaanka, xogta tijaabada ah iyo tusaalooyinka arjiyada injineernimada, xulashada wareega kalluunka wareegga ama matoorka maareynta mashiinka dheereeya. Qaybta), Ama ku dheji granulator (Ku dar nidaamka biyaha qaboojinta qaybta qolka qaybta), Ama sariirta dareeraha dheecaanka leh (Nidaamka kala-soocida sariirta ee dheecaanka leh iyo habka kala-soocidda kala-soocidda waa ka duwan tahay) .Baahiyaha qoyaanka qoyaanka granulation wuxuu ku saabsan yahay 8-18%. oo ku saabsan astaamaha wax soo saarka iyo hababka wax soo saarka, si loo go'aamiyo naqshadeynta geedi socodka inta badan waxay ka kooban tahay: cajiin, granulation, qalajinta, baaritaanka, baakadaha, nidaamyada hawo kulul, nidaamka ka saarida boodhka.
Shaxda Qulqulka Jet Mill Mill WP Line / WDG Line
Marka hore, alaabta ceyriinka ah waxaa loo qaadi doonaa 1000L Buffer ， ka dibna itto ZGH-1000 mashiinka isku dhafka ah ee tooska ah ee Vacuum ZKS-6 ee isku dhafka qoyaanka ka dibna loo raro XL-450 extriller granulator (3pcs) iyada oo loo sii marayo qaybiyaha 500L ee granule qoyan, ka dibna QZL- 1300 pelletor, iyo ZQG-7.5 X 0.9 gariir Fulin-sariiro qalajiyaha granules ka dibna ZS-1800 kala gariirka gariirka sanduuqa shaandhada si loo helo granules cabirka loo baahan yahay.
Qalajiyaha Sariirta ee dareeraha ah ee kala baxa
Gariirka gariirka sariirta dareeraha ah ee budada kiimikada
Sariirta dareeraha gariirka waa tiknoolajiyad cusub oo lagu soo saaray sariirta dareeraha caadiga ah. Gariir farsamo ayaa lagu daray sariirta dareeraha. Qaybaha maaddada qoyan waxay galaan durdurka hawada waxayna sameeyaan sariir dheecaan leh. Maaddada waxaa loo saaray xoog xoog badan. Gariirka saxanka qaybinaya hawada ayaa kicinaya dheecaanka walxaha walxaha iyo dhaqdhaqaaqa alaabta sariirta dareeraha. Waxyaabaha dareeraha ah waxay la xiriiraan hawada kulul isla mar ahaantaana waxay ku shaqeeyaan kuleylka iyo wareejinta ballaaran. Shayga la qalajiyey waxaa lagu sii daayaa dekedda laga sii daayo.
1. Wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyad heer sare ah oo loo yaqaan 'vibrofluidization technology', waxyeellada dusha walxaha walxaha la qalajiyey way yar yihiin.
2. Dhaqdhaqaaq joogto ah, la qabsi wanaagsan.
3. gariirku wuxuu keenaa dheecaan, dheecaanka qulqulka hawadu wuu yaraadaa, xoogaa qaybo ah ayaa ku xidhma.
4. Waqtiga deganaanshaha maadiga ahi waa mid iswaafaqsan, tayada alaabtu waa isku mid.
5. Waxaa loo adeegsadaa qalajinta alaabta xasaasiga u ah kuleylka waqti gaaban, sida, biyaha oogada
qalajinta CUSO4 · 5H2O waxaa ku jira biyo kareem ah, MgSO4 · 7H2O.
Baaxadda ay khuseyso
Waxaa loo isticmaali karaa geedi socodka qallalan ama qaboojinta, oo lagu dabaqi karo walxaha waaweyn ama walxaha isla markaana aan sahlaneyn qulqulka alaabooyinka aan caadiga ahayn, ama sababtoo ah si looga dhigo walxo yar dalbashada iyo xajinta xawaaraha dheecaanka ee alaabada iyo fududahay in la isku xidho, xasaasi u ah heerkulka qalajinta oo ay ku jiraan qalabka gesso badeecada biyaha laga saarayo.
Model Aagga sariirta oo dheecaan leh
(M2) Heerkulka hawada ee gudaha
(oC) Heerkulka hawada ka baxsan
(oC) Awoodda biyaha uumi-baxa
ZLG6 × 0.75 4.5 70-140 40-70 120-140 ZDS42-6 2.2 2
ZLG6 × 0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 ZDS42-6 2.2 2
ZLG7.5 × 0.60 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2 2
XL Rotary iyo Granulator Extrude
Guud ee codsiyada
Mashiinkaani wuxuu korsadaa hal lamid oo ah daab wax lagu shiidi karo si uu u shiido foomka wax qoyan oo galay guntin-qaab granule ah oo birta birta ah oo birta ah oo la siinayo pelletize ee geeddi-socodka soo socda.Mashiinka wuxuu heli karaa granule cabbir kala duwan ah isagoo beddelaya shaandhada birta birta ah.
Waxay ka baaraandegi kartaa qalabka qoyan waxayna heli kartaa cabbir kala duwan iyadoo loo eegayo maadada iyo shuruudaha.
Awoodda matoorka waxaa lagu kala qaadaa saddexda xagalka-giraangirta sanduuqa marshada ee martida loo yahay, waxaana loo qaybiyaa awoodda qaybaha gudbinta ee sanduuqa marsada. Ku dar waxyaabo cayriin qashinka quudinta, ka riix kor.
Isku darka ka dib, maaddadu waxay ku badan tahay cunta quudinta waxaana lagu qasbay dibedda iyada oo ay leedahay daab gaar ah. Marka alaabtu ku badan tahay farqiga u dhexeeya daab iyo mesh shaashadda, mindida goynta ayaa u goyn doonta cabirka midaynta.
Diidmada 150-250kg / saacad (qaabka flake), 50-100kg / saacad (qaabka granule)
Cabbirka Granule 0.5-2mm
Cadaadiska ugu badan 294Kn (30T)
Cadaadiska dhinaca qufulka 9.8Kn
Mashiinka quudinta 2.2Kw
Mashiinka Granulating 2.2Kw
Matoorada matoor 7.5Kw
Quudinta xawaaraha fur 6-33 hagaajin karo
Cadaadiska Xawaaraha Gawaarida 4-25 lagu hagaajin karo
Cabbirka shaagagga riixaya 240X100mm
Miisaanka (qiyaastii) 2000Kg
Cabirka qaybta ugu weyn 1600X1000X2300mm
Xakamee cabbirka golaha wasiirada 600X400X1300mm
Mashiinka ayaa inta badan ku habboon warshadaha dawooyinka, warshadaha cuntada, warshadaha cabitaanka adag iyo wixii la mid ah, Waxay ka dhigi kartaa walxaha ceeriin ee la kiciyay inuu qoyaamo qanule loo baahan yahay. Gaar ahaan, waxay ku habboon tahay alaabta ceeriin ee leh xabag dhejis ah.
Dhammaan qeybaha lala soo xiriiray alaabta ceyriinka ah ee mashiinkan waxay ka sameysan yihiin bir bir ah. Muuqaalkeedu waa qurux. Dheecaankeedu waa otomatik Sidaa darteed waxay ka fogaan kartaa xaaladaha waxyeelada leh ee ay keentay buuga. Waxay ku habboon tahay wax soo saarka khadka sidoo kale.
Qalabka farsamooyinka waaweyn
Cabbirka mindi shiididda (mm) 300 400
Ballaca dhalada (mm) 2 ~ 2.2 (Waxay noqon kartaa mid waafaqsan shuruudaha macaamiisha) 1.2 ~ 3 (Waxay noqon kartaa mid waafaqsan shuruudaha macaamiisha)
Isku darka guud (mm) 700 × 540 × 1300 880 × 640 × 1300
Awooda mootada (kw) 3 4
Miisaanka (kg) 350 400
Awoodda wax soo saar (kg / h) 100 ~ 200 140 ~ 400
Buuxi ahama Full Xawaaraha Sare
LGH nooca tooska ah ee isku dhafan wuxuu ka kooban yahay alaabada wax loo diro ee hoose iyo xawaaraha sare ee shixnadaha burburka, Dhagaha hoose ayaa si isdaba joog ah wax ugu diraa dusha sare darbiga weelka.
Xawaaraha sare ee shixnadaha burbura ayaa maaddada si buuxda u jajabiya wax ka dhiga wareegga maadada sida wareegga, si loo dhammeeyo isku-darka si isku mid ah muddo gaaban.
LGH mashiinka isku dhafka xawaaraha sare ee nooca tooska ahi waa nooca ugu cusub ee fiicnaanshaha waxsoosaarka warshadeena, kaasoo ururiyey farsamooyinka horumarsan ee gudaha iyo dibedda. Muuqaalada ugu muhiimsan waa sida soo socota:
1.Mashiinka ugu hooseeya wuxuu si isdabajoog ah ugu dirayaa maaddada dusha sare iyada oo loo marayo xoogga bartamaha. Waxyaabaha sarena waxay hoos ugu dhacaan xagga hoose ee xarunta, si ay uga dhigaan wareegga maadada sida wareegga oo kale.
2.Sawarado xawaare sare ku jajabiya ayaa kala jaraya alaabada guud ee gabi ahaanba soo dirta dhagaha hoose.
3.Waxyaabaha ayaa si isku mid ah isugu qasmi kara waqti yar gudahood sababtoo ah labada dhago ee kacaanka xawaaraha sare leh. Xawaaraha isku dhafka iyo isku mid ahaanta ayaa ah midka ugu fiican dhammaan noocyada mashiinka isku dhafan ee suuqa gudaha. Isku mid ahaanta waa 100% isku dhafan.
4.Start waalka siideynta, xawaaraha siideynta waa mid aad u dhakhso badan, iyo mashiinka waa u fududahay in la nadiifiyo.
5.Mashiinka xiriirka mashiinka waxaa lagu sameeyay birta birta ah, inta lagu gudajiro howsha isku dhafka, maaddadu isma beddeli doonto, metamorphic wayna lumaysaa.
Mashiinka 6.Mashiinka wuxuu ku habboon yahay qalab kala duwan oo qallalan oo qoyan oo la isku daro, gaar ahaan ku habboon isku darka nuxurka digaagga, daawada la kala diro, cabitaanka la kala diro iyo wixii la mid ah.
Shaashadda 'VS vibrary shaashadda'
sidoo kale loo yaqaan 'Rotary vibro sifter', vibrator sieve.Way kala saari kartaa dareeraha sida biyaha wasakhda ah iyo saliida qashinka iwm, ka saar wasakhda ku jirta maaddada, sida caanaha budada, bariiska, galleyda iwm Kala-saar / u-dhig budada isku-dhafan cabbir kala duwan oo aad adigu leedahay looga baahan yahay.
Dhuxusha Rotary / dhuxusha ultrasonic birqaya mashiinka shaandhada shaashadda ayaa la qaatay farsamooyin casri ah qalabka baaritaanka casriga ah. Waxay ka kooban tahay soo saaraha ultrasonic iyo shaashadda birqaya. Waa guul muhiim u ah baaritaanka waxtarka. Mashiinkaan shaandhaynta ah wuxuu kobciyaa xakamaynta garaadka garaadka leh ee garaadka leh ee ultrasonic wuxuuna xalliyay dhibaatooyin badan oo ay keeneen hal mar soo noqnoqda, runtiina wuxuu ogaanayaa isku-darka macquulka ah ee shaqada ultrasonic iyo shaandhada gariirka.
Hawlo badan sida soo socota:
Nooca lakabyada badan ayaa shaashanaya oo kala saari kara shan koox oo qaybo kala duwan ah isla waqti isku mid ah. Waxay ku habboon tahay qalabka qalalan.
Isku dhafka adag iyo dareeraha ayaa si wax ku ool ah loogu kala saari karaa hal nooc ama lakabyo badan maadooyinka fasalka kala duwan.
3. Ka saar wasakhda
Unuggu wuxuu si dhakhso leh u kala sooci karaa xoogaa culeys ah ama hoos u dhigi karaa waxyaabo ka kooban tiro
Nidaamka nadaafadda waxaan u isticmaalnaa qalabka loo yaqaan 'ultrasonice qalab' loogu talagalay dhuxusha Rotary / dhuxusha Xiinka mashiinka shaandhada shaashadda
Kneader waa qalab ku habboon in lagu cajiimo, lagu qaso maadooyinka polymerize leh iskudhaf sare iyo balaastigga elasto. Qeyb kasta oo jilicsan waxay leedahay laba qaybood oo ah calaamadaha sigma gudaha qolka isku-darka nooca w. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa in lagu miiro, la isku qaso, la burburiyo, loo kala firdhiyo oo dib loo polymerize dhejis isku-dheji sarreeya ama walxaha elastoplastic-ka ah, oo aan lagu farsameyn karin isku-darka budada guud iyo kuwa dareeraha isku dara. Waxaa loo isticmaali karaa warshadaha looga baahan yahay cufnaanta cufnaanta sare sida beeraha, kiimikada, cinjirka, cuntada iyo diyaarinta dawooyinka. Saameyntu way ka fiican tahay fiicni. Kneader waa qalab khaas ah oo khaas ah oo leh laba bladood. Mid dhakhso badan badanaa wuxuu ku wareegaa xawaare dhan 42 kacdoon daqiiqaddii, mid gaabis ah xawaare 28 kacaan daqiiqaddii. Xawaareyaal kaladuwan ayaa ka dhigaya waxyaabaha isku qasmaya inay si dhakhso leh u helaan homogenate.
- Naqshadaynta dhirta
- Kormeerka geedi socodka, xakamaynta iyo otomaatiga
- Soosaarista softiweerka iyo barnaamijka codsiga waqtiga dhabta ah
- Soo saarista mashiinada
- Qorsheynta mashruuca
- Kormeerka iyo maaraynta goobta dhismaha
- Rakibaadda iyo tijaabinta qalabka iyo nidaamka xakamaynta
- Komishanka mashiinada iyo dhirta
- Tababbarka shaqaalaha
- Taageerada inta lagu jiro wax soo saarka
- Suurtagalnimada iyo daraasadda fikradda
- Xisaabinta Qiimaha iyo Faa'iidada
- Jaangooyooyinka iyo qorsheynta kheyraadka
- Xalka Turnkey, hagaajinta dhirta iyo xalalka casriyeynta
- Injineero aqoon leh
- Adeegsiga tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay
- Ka faa’iideysiga aqoonta ay ka heleen boqolaal codsi oo ka jira dhammaan warshadaha
- Khibrada ka faa'iideyso injineeradayada khibrada iyo wada-hawlgalayaashayada
Hore: LSM Vertical Wet Stirring Mill
Xiga: Nooca Caangaarka ah Nooca Cajaladda Jet Mill
Nidaamka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gaarka ah ...
Jet Mill WP Nidaamka – U codso Agrochemical ...
Isticmaalka Gaarka ah ee Mill-Jet Mill dhalaalaya in High H ...